SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kikongo Kirundi Korean Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Maya Mizo Mongolian Myanmar Ndebele Norwegian Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese
Nyaya ino ine mibvunzo ingave yakakunetsa uye inokuratidza paungawana mhinduro dzacho muBhaibheri rako. Zvapupu zvaJehovha zvichafara kukurukura newe mhinduro dzemibvunzo iyi.
1. Kunongova nechitendero chimwe chete chechokwadi here?
Jesu akadzidzisa vateveri vake chitendero chechokwadi chimwe chete. Akachifananidza nemugwagwa unoenda kuupenyu. Nezvemugwagwa uyu, Jesu akati: “Vashomanana ndivo vanouwana.” (Mateu 7:14) Mwari anogamuchira kunamata kunobva muShoko rake rechokwadi chete. Vanamati vose vechokwadi vane kutenda kwakafanana.—Verenga Johani 4:23, 24; 14:6; VaEfeso 4:4, 5.
2. Nei zvitendero zvakawanda zvichizviti ndezvechiKristu?
Vaprofita venhema vakatanga kuita zvinhu zvinopesana nechiKristu uye vakatungamidza zita rechiKristu kuitira kuti vawane zvavaida. Sezvakafanotaurwa naJesu, vanozviratidza se“makwai” asi ivo vari mhumhi dzine nzara. (Mateu 7:13-15, 21, 23) ChiKristu chokunyepera chakazonyuka pakafa vaapostora vaJesu.—Verenga Mabasa 20:29, 30.
3. Ndezvipi zvimwe zvinoratidza kuti uku ndiko kunamata kwechokwadi?
Vatendi vechokwadi vanoremekedza Bhaibheri vachiriona seShoko raMwari. Vanoedza kurarama vachitevedzera zvarinotaura. Saka chitendero chechokwadi chakasiyana nechiya chinotevedzera pfungwa dzevanhu. (Mateu 15:7-9) Vatendi vechokwadi vanoita zvavanoparidza.—Verenga Johani 17:17; 2 Timoti 3:16, 17.
Chitendero chechokwadi chinokudza zita raMwari rokuti Jehovha. Jesu akaita kuti zita raMwari rizivikanwe. Akabatsira vanhu kuti vazive Mwari uye akavadzidzisa kuti vanyengetere kuti zita raMwari ritsveneswe. (Mateu 6:9) Kwaunogara ndechipi chitendero chinokurudzira vanhu kushandisa zita raMwari?—Verenga Johani 17:26; VaRoma 10:13, 14.
4. Ungaziva sei vatendi vechokwadi?
VaKristu vechokwadi vanoparidza nezvoUmambo hwaMwari. Mwari akatuma Jesu kuti aparidze nezvoUmambo. Umambo hwaMwari ndihwo chete huchagadzirisa matambudziko evanhu. Jesu akaramba achitaura nezvahwo kusvikira zuva raakazofa. (Ruka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Akaudza vateveri vake kuti vaparidze nezveUmambo hwaMwari. Kana mumwe munhu akauya kwauri achitaura nezvoUmambo hwaMwari, unofunga kuti ndewechitendero chipi?—Verenga Mateu 10:7; 24:14.
Vateveri vaJesu havasi venyika ino yakaipa. Havapindiri mune zvematongerwo enyika kana kubatanidzwa mumagakava anoitika kwavanogara. (Johani 17:16) Uyezve, havatevedzeri maitiro anokuvadza enyika ino nemafungiro ayo.—Verenga Jakobho 1:27; 4:4.
5. VaKristu vechokwadi vanonyanya kuzivikanwa nei?
VaKristu vechokwadi vanonyatsodanana. Zvavanodzidza muShoko raMwari zvinovaita kuti vadzidze kuremekedza vanhu vemarudzi akasiyana-siyana. Kunyange zvazvo chitendero chenhema chichiwanzotsigira zvakasimba hondo dzenyika, vatendi vechokwadi vanoramba kuita izvozvo. (Mika 4:1-4) Pane kudaro, nhengo dzechitendero chechokwadi dzinoshandisa nguva nesimba ravo kubatsira uye kukurudzira vamwe.—Verenga Johani 13:34, 35; 1 Johani 4:20, 21.
Ndechipi chitendero chinotora zvose zvachinodzidzisa muShoko raMwari, chinokudza zita raMwari, uye chinoparidza kuti Umambo hwaMwari ndihwo chete huchagadzirisa matambudziko ose evanhu? Ndechipi chitendero chine rudo uye chisingatsigiri hondo? Kubva pane zvatinoona Zvapupu zvaJehovha ndizvo zvinoita izvozvo.—1 Johani 3:10-12.
Kuti uwane mamwe mashoko, ona chitsauko 15 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?, rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
“Vanotaura pachena kuti vanoziva Mwari, asi vanomuramba nemabasa avo.”—Tito 1:16
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ungaziva Sei Kunamata Kwechokwadi?